Ịdọ aka ná ntị ka ndị amụma ụgha | Apg29
Ịdọ aka ná ntị ka ndị amụma ụgha
Kpachara Anya ụmụnne si agbasoru iwu n'isi ndị mmadụ, ha na-adịgboroja na ụgha na-ebu amụma.
Kpachara anya, ebube ụmụnne. Ndị amụma ụgha na-ekwusa ozi ọma bụ n'ebe nile Facebook, na ụfọdụ na parish. Ha na-efu ha na kwere na ha bụ ndị ziri ezi. Idebe iwu-agọnahụ n'obe nke Jesus enweghị onye maara banyere ya.
Ịdọ aka ná ntị ka ị na-ekwu na ị bụ onye amụma, na-ekwusa ma ọ bụ pastọ. Ị na-eduhie ndị mmadụ ndụ n'okpuru iwu. Ị mmenyenjo ha na gị ụgha amụma na okwuchukwu. Ị chọrọ nwere ike karịrị nke ha site na-eduhie eduhie na-atụ aro na iwu na-emetụta.
Nke a bụ ịdọ aka ná ntị unu. M na-atụ na i laghachi gị ozizi nduhie na na-anabata Jesus - ma ọ bụghị m ga-ekpughe onye ị bụ!
M maara na ị na mara ihe mkpụrụ rere ure ị na-agba. Ị na-ise na isii ndị amụma ụgha, ndị nkwusa na ndi ozuzu aturu.
Kpachara Anya ụmụnne
Ya mere, kpachara anya na nwanne nke agbasoru iwu n'isi ndị mmadụ, ha na-adịgboroja na ụgha na-ebu amụma.
All amụma na-ekwusa ozi ọma na mmadụ kwesịrị idebe iwu ndị Old Testament bụ heresy na ụgha.
Otu ụzọ n'ụzọ iri na-abịa ụgha.
Na idebe ubochi izu ike ma unu erila anụ ezi, wdg, bụ ụgha na ụgha. Ọ bụ heresy na dịghị na Bible.
Na unu ndị ekwusakwa a na chọọchị na ịda ogbenye na ọrịa a bụrụ ọnụ - ọ bụ ụgha na heresy. Ebe na Bible ọ na-ekwu?
Ị ka amụma a ụbọchị ole na ole gara aga, mgbe ụgbọala a ụgbọ ala, na Iri okwu, ebee ka a na New Testament?
Na na ị chọrọ onyinye na-ekwu na e nwere 164 iwu na-, gịnị ka ị na pụtara? Na mgbakwunye na 613 ndị na-na iwu? Ma ọ bụ ka ị ga 164 nke 613 ma jide ha? Nke a bụ ụgha na ụgha.
Aha gị ga-ekpughe
Na 2020, aha gị ga-abụ ihe niile banyere ihe a, ọ bụrụ na ị na-anọgide na gị heresy.
Na-eche ihe ị chọrọ banyere m - na m hụrụ gị n'anya, ma unu dị ka mgbe ị ekwusa ụgha na-eduhie ndị na-adịghị enwe mmetụta nke ọma ma na-arịa ọrịa, na ndị ọzọ.
N'ihi ya na-akpachara anya, ebube ụmụnne. Ndị amụma ụgha na-ekwusa ozi ọma bụ n'ebe nile Facebook, na ụfọdụ na parish. Ha na-efu ha na kwere na ha bụ ndị ziri ezi. Idebe iwu-agọnahụ n'obe nke Jesus enweghị onye maara banyere ya.
Lee ụfọdụ amaokwu nke iwu ka ndị na-ụgha duhiere ndị nkwusa, wdg, na-kwere na otu ụzọ n'ụzọ iri na-emetụta, ma ọ bụ izu ike, na-adịghị eri anụ ezi na ndị dị otú ahụ.
Chineke na-agọzi gị. Kpee ekpere ka Mọ Nsọ ndu Dej mere na ị na-aghọta eziokwu nke Jesus Christ NASA ji aha, amen.
Kama Chineke onye ebere ya dị ukwuu, hụrụ anyị n'anya na ịhụnanya dị ukwuu, ọbụna mgbe anyị nwụrụ anwụ site na njehie anyị, o mere ka anyị dị ndụ ma na Christ. Site amara ka e jiworo zọpụta. Ee, ọ kpọlitekọkwara anyị ọnụ ma mee ka anyị na-anọdụ ọnụ n'ebe dị n'eluigwe na Kraịst Jizọs, na n'oge na-egosi na ya karịrị nke àkù nke Ya amara na obiọma n'ebe anyị na Kraịst Jizọs. N'ihi na amara na-unu azọpụta site na okwukwe: ma na ọ bụghị onwe unu, ọ bụ onyinye Chineke, ọ bụghị n'ihi na nke ọrụ, ghara onye ọ bụla kwesịrị isi. N'ihi na anyị bụ ya kwee efọd ahụ, kere Christ Jizọs maka ọrụ ọma, nke Chineke kwadebere tupu oge eruo na anyị kwesịrị ije ije na ha.
Nke a mere mgbe ọ nọ na-aru wepụrụ n'iro, iwu nke nyere n'iwu na ụkpụrụ nke abụọ n'ime onwe ya otu onye dị ọhụrụ, otú ike n'udo. "
"Na ya na site okwukwe na ya na anyị nwere ike n'atụghị egwu na obi ike na-eguzo n'ihu Chineke." Ndị Efesọs 3:12 SFB98
Tupu okwukwe bịara anyị nọ na mkpọrọ na chere ya nche site iwu ruo mgbe okwukwe na a ga-ekpughe. The iwu bụ na anyị schoolmaster iji mee ka anyị si Kraịst, ka anyị nwere ike ezi omume site n'okwukwe. "
Ndị Galeshia 3: 23-24 SFB98
Ọ bụghị site n'iwu ka Abraham na ụmụ ya natara nkwa iketa ụwa, kama site n'ezi omume nke na-abịa site n'okwukwe. Ọ bụrụ na ndị na-agbaso iwu ndị nketa, mgbe ahụ, okwukwe bụ ihe efu nke ọdịnaya na nkwa wepụta nke ike. The iwu na-arụpụta iwe. Ma ọ dịghị iwu, ọ dịghị njehie. "
Ndị Rom 4: 13-15 SFB98
Amaokwu 13, Abraham n'onye ezi omume site n'okwukwe o kwere na Chineke na bụ onye ezi omume, iwu nke Fans ọbụna n'oge Abraham.
"Ma iwu bịakwara na ikpe ga-adị otú nnọọ ukwuu. Ma n'ebe nmehie ụba, amara ọtụtụ ọbụna karịa "
Ndị Rom 5:20 SFB98
Ma anyị maara na Iwu ahụ bụ ihe ọma ma ọ bụrụ na onye na-eji ya n'ụzọ kwesịrị ekwesị na-aghọta na ọ bụghị ndị ezi omume ma maka mmebi iwu na-enupụ isi, adịghị asọpụrụ Chineke na ndị mmehie, n'ihi na unholy arụọ, n'ihi ndị na-emegbu nna ya na nne, n'ihi na-egbu ọchụ, maka ndị eme ịkwa iko na nwoke idina nwoke, n'ihi na-azụ ahịa ohu, ndị ụgha, perjurers na ihe niile na-eguzogide ụda ozizi - "
Timoti 1: 8-10 SFB98
The iwu bụ ihe ọma ma, ajụjụ bụ ime na ị jikwaa burrow niile 613 ìgwè, ie ndị ọzọ okwu, onye na-eme iwu, mmehie mgbe? Ma ọ bụ n'ihi na ihe atụ, ọ bụrụ na ị na-izu-ike ma ọ bụ iri, na adịghị na-eri ezi anụ na wdg ka iwu kwuru,
Na ọ bụrụ na ị daa otu n'ime ndị 613, ị ga-agbaji dum iwu? Mgbe ịgụ bụghị ndị ezi omume n'ihu Chineke, mgbe ahụ ị bụ otu n'ime ndị na-
machibidokwara na-enupụ isi, ajọ omume na mmehie mm,
"Ma onye na-ruo idebe iwu bụ ndị a bụrụ ọnụ. Ọ na-dere, sị: "Onye a bụrụ ọnụ ka onye na-adịghị jidesienụ ka ihe niile e dere n'iwu akwụkwọ na-eme ha. '"
Galetia 3:10 SFB98
"Anyị na-arụ ụka na nwoke a na-agu n'onye ezi omume site n'okwukwe nke na-na na-eme nke iwu."
Ndị Rom 3:28 SFB98
"Gịnị ka anyị pụrụ ikwu na nna anyị Abraham meriwo site n'ọrụ? Ọ bụrụ na Abraham e ezi omume site n'ọlu, mgbe ahụ, o nwere ihe ọ inua nke - ma n'iru Chineke. N'ihi na ihe a ka akụkụ Akwụkwọ Nsọ? "Abraham kwere Chineke, ewe gua nke ahu nye ya n'ezi omume." Onye na-arụ ọrụ mgbe na-enweta ha ụgwọ ọnwa, ọ bụghị nke amara ma dị ka ihe ọ na-akwụ. Ma onye na-enweghị rụ na-ekweghị na ya na-akpọ-adịghị asọpụrụ Chineke, okwukwe ya na-gua ezi omume. "
Ndị Rom 4: 1-5 SFB98
Ị ndị nwụrụ anwụ ná njehie unu na gị na-ebighị úgwù uwa, nakwa na ị nwere ka ọ quickened ọnụ ya na Kraịst. Ọ agbaghara anyị mmejọ nile na gafere si promissory ndetu ha choro gbara akaebe megide anyị. Ọ weere site n'ịkụgide ya cross. "
Ndị Kọlọsi 2: 13-14 SFB98
Jesus napụta gị iwu, o kpọgidere mmehie gị na obe na-akwụ ụgwọ maka ha jiri ọbara ya,
Maka ndụ na iwu nke Mọ-Christ Jesus emewo ka m nwere onwe si n'iwu nke mmehie na ọnwụ. Ọ gaghị ekwe omume n'ihi na iwu, na-adịghị ike dị ka ọ bụ site na anụ ahụ, Chineke mere site n'izite Nwa nke Ya dị ka àjà mmehie, onye na atugharị dị ka onye mmehie, na-aru-ya, Chineke katọrọ mmehie. "
Ndị Rom 8: 2-3 SFB98
N'ihi na Chineke hụrụ ụwa n'anya nke na o nyere Ọkpara ọ mụrụ naanị, na onye ọ bụla nke kwere na ya ghara ịla n'iyi kama ka o nwee ndụ ebighi ebi. "
Jesus ịhụnanya ị O biri n'okpuru iwu 100% dị ka mmadụ ịbụ na ị ga-enweghị na-eme ihe na-azọpụta site na okwukwe na amara.
"Gịnị mere unu onwe-unu inwa Chineke, na n'olu nke na-eso ụzọ a yoke nke abughi nna nna anyị hà ma ọ bụ anyị nwere ike bear?"
Ọrụ 15:10 SFB98
Ga-anụ ahụ ọ bụla a ga-agu n'onye ezi omume n'anya-ya site n'idebe iwu. Site iwu anyị na-ama nke mmehie. "
Ndị Rom 3:20 SFB98
Ọ bụrụ na iwu na-arụ ọrụ. Faith, anyị ga-adị mkpa.
"N'ihi gini" nke okwukwe, "ka ọ we di site na amara na-ekwe nkwa iguzosi ike maka ụmụ ya niile, ọ bụghị naanị n'ihi na ndị bụ ndị nke iwu na ndị mmadụ kamakwa maka ndị nwere okwukwe nke Abraham, onye bụ nna anyị nile. "
Ndị Rom 4:16 SFB98
"Sin ga-enweghị n'aru unu, n'ihi na unu anọghị n'okpuru iwu kama n'okpuru amara."
Ndị Rom 6:14 SFB98
"Ya mere, na-unu, umu-nnam, site n'ahụ Kraịst na-nwụrụ anwụ ka iwu, na unu bụ ndị nke ọzọ, ya bụ onye na-akpọlite ​​ndị nwụrụ anwụ, na anyị ga na-esi nkpuru nye Chineke."
Ndị Rom 7: 4 SFB98
Biko na-agụ dum Ndị Rom 7 (mkpa)
Ma site na ụbọchị nke Jọn Baptist ruo ugbu a, alaeze eluigwe doro ime ihe ike, na ndị ikom nke ime ihe ike emegbu ya. N'ihi na ndị amụma niile na iwu nwere buru amụma ruo John, "
"The iwu na ndi-amuma nwere oge ha ruo mgbe John. Kemgbe ahụ, ozi ọma nke ala-eze Chineke, madu nile ume na-abanye. "
N'ihi na ọ dịghị ndị ọzọ na ntọala nwere ike na onye ọ bụla nkịtị karịa na a na-tọrọ, Jesus Christ. "
Kọrịnt 3:11 SFB98
N'ihi na ọ bụrụ na mbụ ọgbụgba ndụ ahụ na-enweghị ntụpọ, e nwere ga-mkpa ohere maka a abụọ. "
Hibru 8: 7 SFB98
The mbụ ọgbụgba ndụ ahụ ọgbụgba ndụ Iwu.
A abụọ ntụgharị bara uru Association.
Grace unu na udo nke si n'aka Chineke bụ Nna anyị nakwa Onyenwe anyị Jizọs Kraịst. "
Filipaị 1: 2 SFB98